Tambajotra mpangalatra moto : saron’ny polisy ry Falinirina sy ny namany | NewsMada
Tambajotra mpangalatra moto : saron’ny polisy ry Falinirina sy ny namany
Teo am-pitondrana moto halatra ireto telo lahy no saron’ny polisin’ny Fip tany Toamasina. Mirongatra loatra ity halatra ity any amin’iny faritra Atsinanana iny ary efa tambajotra mihitsy.
Saron’ny Fip ny tambajotrana mpangalatra moto eto Toamasina, Foulpointe ary hatrany
Fenoarivo Atsinanana sy Mananara Avaratra. Mandrafitra iny lalam-pirenena fahadimy iny mihitsy ireo olon-dratsy ireo, izay tarihin’i Falinirina, 26 taona monina any Tanamakoa sy Joel, 30 taona monina ao Canada ary i Christophe, 24 taona monina ao Salazamay. Ny asabotsy
18 novambra teo, nahazo loharanom-baovao tamin’ny tsara sitra-po ny polisy fa misy moto very teo anoloan’ny trano fisotroana iray tao Mahavelona Foulpointe sy tao amin’ny Cite Haras Toamasina. Nandray ny andraikiny sy nametraka vela-pandrika tamin’ iny lalam-pirenena fahadimy iny ny polisin’ny Fip taorian’izay.
Ny alahady 19 novambra tokony tamin’ny 5 ora sy sasany maraina, sarona teo ny telo lahy izay samy mitondra moto halatra avokoa . Nandritra ny fanadihadiana savaranonando nataon’ny polisy no nahalalana fa efa tambajotra mpangalatra moto mihitsy ireto telo lahy ireto ary manana fomba fiady manenika ny lalam-pirenena fahadimy. Moto halatra avy ao Toamasina sy Foulpointe amidy any Fenoarivo Atsinanana sy Mananara Avaratra.
Nilaza ny kaomandin’ny hery vonjy taitra Toamasina, ny kaomisera Rafaliarivo Jules, fa efa nanana vaovao momba azy telo lahy ireo ny tenany. Fantatra araka izany fa mpangalatra no sady mpivarotraa moto halatra ireto tratra.
Vokany, manao antso ho an’ ireo manana moto very, noho izany, ny kaomisera misahana ny Fip any Toamasina mba hitondra taratasy hanatona eny amin’ny birao Ankirihiry haka ny motony.
Tsy ny any Toamasina ihany no mirongatra ny halatra moto fa hatreto an-dRenivohitra. Maromaro ny efa tratran’ny polisy tamin’izany, kanefa mbola misy hatrany ireo tsy maty voalavo an-kibo. Ny moto Scooter no tena lasibatra amin’izany. Eo ihany koa ireo moto routière izay misy mandefa any amin’ny faritany ary efa nisy saron’ny polisy teto an-dRenivohitra. “Mila mailo amin’ny fananany ny rehetra satria tsy kely lalana ny ratsy”, hoy ny fanazavan’ny mpitandro filaminana.